Pasina mvura, hapana inokura, dzidza kugamuchira yemadutu hwako. - Anotungamira - Quotes Pedia
Inodaro kukundikana chikamu chakakosha yehupenyu hwedu nekuti ivo vanongotiumba zvakatinakira. Dzimwe nguva tinofanira kunzwisisa chokwadi chekuti madutu haangouya kuzoparadza hupenyu hwedu asiwo kujekesa nzira yedu.
Hupenyu haambovi mubhedha wemaruva uye unogara uchikwiza coaster. Hupenyu hune hwayo hwekutanga uye zvahunoreva. Hatife takarasikirwa netariro nekuvimba muna Mwari. Tinofanira kuyeuka kuti Mwari ari kungotigadzirira Hupenyu huri nani uye hune chinangwa nekutipa izvo zveupenyu zveupenyu.
Kukundikana ndiwo matanho ekubudirira nekuti tinokura nekukanganisa chete. Tinofanira kuita zvikanganiso nekuti ivo chete vanotibatsira kuongorora kuti sei uye kupi isu toda zvisizvo.
Nyanzvi yekufunga uye nyanzvi yefizikisi Albert Einstein akambotaura kuti chero munhu asina kumbokanganisa haana kumboedza chero chinhu chitsva. Muchokwadi, kukundikana kwakawanda kwehupenyu ndeavo vakasiya panguva yekupedzisira pachinzvimbo chekuona kuti vaive padhuze sei kubudirira.
Hatifanire kuodzwa mwoyo nezvehupenyu kana taona kutadza kwedu. Izvi zvinodaro nekuti chinhu chega chisingagumi munyika ino change, uye danho rakaipa rinozopera pamwe nenguva. Tinofanira kuyeuka kuti kana mamiriro acho akaoma, chete iyo yakaoma inosvika. Izvi zvinoreva kuti tinosarudza isu toga.
Kubata kwedu nesimba uye kurwira ndeyechokwadi chinyorwa cheshoko redu rekubudirira. Izvo zvakakosha kuti tizvipe isu nguva uye tive nekutsungirira kumirira mhedzisiro. Zvisinei nekuti chii chinoitika muhupenyu, hatifanire kurasa tariro.
Vanokunda havaite zvakasiyana; asi ivo vanongoita zvinhu nenzira dzakasiyana. Hupenyu ndizvo zvese nezve nzira yekunzwisisa nekuturikira kukanganisa kwedu uye nekushandisa zvakanakisa kushandisa nguva nezviwanikwa kuita kufamba kwakapusa, zvinozotitora nhanho imwe pedyo nekubudirira.
Motivational Quotes Pamusoro peHupenyu
Yakanaka Mugovera Quotes
Quotes Pana Kunaya
Kukura Kwako Quotes
Pamusoro Quotes Pamusoro peHupenyu
Kurwadziwa kwese kunopa chidzidzo uye chidzidzo chega chinochinja munhu. - Asingazivikanwe
Kurwadziwa kwese kunopa chidzidzo uye pachinzvimbo chekunamatira pakurwadziwa ikoko, ita shuwa kuti iwe…
Kurambwa kwakajeka kunogara kuri nani pane kuvimbisa kwekunyepedzera. - Asingazivikanwe
Kurambwa kwakajeka kunogara kuri nani pane kuvimbisa kwekunyepedzera. - Asingazivikanwe Akabatana Akabatana
Usave muranda wepfungwa dzako. Zvidzora. - Asingazivikanwe
Usave muranda wepfungwa dzako. Hongu, dzimwe nguva, unogona kunzwa kuputsika, kusuruvara uye kuora mwoyo.
Chero chinhu chinokutorera rugare rwako chinodhura zvakanyanya. - Asingazivikanwe
Kugadzikana kwepfungwa uye kugara zvakanaka zviri kunyanya kukosha kurarama hupenyu hune hutano uye hwakareruka. Pfungwa…